Autotarget: motera marketing amin'ny fitondran-tena ho an'ny mailaka | Martech Zone
Miorina amin'ny resaka marketing ny tahiry fitondran-tena amin'ny index, demografika ary manao vinavina Analytics amin'ny vinavinanao mba hivarotra azy ireo am-pahendrena kokoa. Izaho dia nanoratra drafitra vokatra taona vitsivitsy lasa izay tamin'ny statistika Maty ireo mpamandrika mailaka mifototra amin'ny fihetsik'izy ireo. Io dia ahafahan'ny mpivarotra manavaka ny isan'ny mpanjifany mifototra amin'ny hoe iza no navitrika indrindra.
Amin'ny alàlan'ny fanondroana anarana momba ny fitondran-tena, ny mpivarotra dia afaka mampihena ny fandefasan-kafatra, na mizaha hafatra isan-karazany, ho an'ireo mpamandrika izay tsy nisokatra, tsindrio na nividy (fanovana) tamin'ny mailaka. Io dia ahafahan'ny mpivarotra manome valisoa ihany koa ary mikendry tsara kokoa ny mpisoratra anarana mazoto indrindra. Ny endri-javatra dia tsy nankatoavina velively mba hampiditra azy io amin'ny vokatra miaraka amin'io orinasa io, fa orinasa iray hafa kosa no tafakatra amin'ity haavo marketing sy fizarazarana fizarana ity, iPost.
iPost dia namoaka motera fitadiavana fitondran-tena tena matanjaka amin'ny filaharany, antsoina AutoTargetTM (tsindrio hampitombo ny sary):
Craig Kerr, VP an'ny Marketing an'ny iPost, dia nanome izao fampahalalana manaraka izao momba ny vokatra:
iPot's Autotarget dia mamela ny mpivarotra hanatsara ny valin'ny fampielezana mailaka amin'ny alàlan'ny faminavina mialoha Analytics. Ny fampiasana Autotarget dia naseho mba hampisondrotana ny tombom-barotra amin'ny fampielezana mailaka 20 isan-jato farafahakeliny ary hampihena be ny fihenam-bidy ary hampiakarana ny tahan'ny karama.
Ny orinasa iray, ohatra, dia nampitombo ny tombom-barotra amin'ny mailaka 28%, nampihena fihenam-bidy, na dia amin'ity tsena sarotra ity aza, hatramin'ny 40% ary nampitombo ny tahan'ny fisokafana 90% taorian'ny volana vitsivitsy monja nampiasana Autotarget. Manafoana ny tombantombana ny Autotarget ary manolo azy amin'ny fomba voaporofo sy mandeha ho azy izay miantoka fa ny mailaka marina dia alefa any amin'ny olona mety amin'ny fotoana mety.
Mpivarotra mailaka maro no mirehareha amin'ny haben'ny nampitomboany ny lisitry ny mailaka. Ary izy ireo, araka ny fomban-drazana, dia nanapoaka faran'izay matetika araka izay azony natao tamin'ny olona betsaka tao amin'ny lisitry ny mailaka araka izay tratra. Ity fomba fiasa ity dia fandaniam-bola very maina ary fomba azo antoka hamoahana ny mpanjifa: Na dia te-hahazo mailaka ara-barotra matetika aza ny mpanjifa sasany, ny sasany kosa tonga dia mihevitra ny mailaka ho toy ny spam ary ny mpandefa dia spammer.
Ny teknolojia an-tserasera maminany an-dàlana tsy manam-paharoa an'i Autotarget dia miasa mafy ho an'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny fampiasana vaovao efa nangoniny momba ny mpanjifa? fitondran-tena amin'ny fantsony rehetra. Ary, vaovao miaraka amin'ny kinova farany, Autotarget dia miasa amin'ny mpanome tolotra mailaka (ESP).
Ahoana ny fiasan'ny Autotarget
Autotarget dia tarihan'ny renirano data roa: voalohany, mailaka tsindrio ary tsindrio ny fihetsika hita maso, ary faharoa, fitondran-tena mividy fantsona. Autotarget dia mahazo hatrany tsindry mailaka ary jereo ny angona momba ny fitondran-tena mivantana avy amin'ny mpanome tolotra mailaka an'ny orinasa ankehitriny.
Ny angona momba ny fitondran-tena ho an'ny mpanjifa dia lasa data azo ampiharina
Mahazo miditra amin'ny angon-drakitra valinteny mailaka isan'andro i Autotarget ary mampiseho olona mahatratra 125 hatramin'ny mpanjifa miaraka amin'ny 12 volana? manara-maso ny angon-drakitra momba ny fihetsik'izy ireo amin'ny fampielezana mailaka. Raha vantany vao tafapetraka ireo personas ireo, Autotarget dia afaka mandefa mailaka lasibatra haingana amin'ny mpanjifa miorina amin'ny toetrany manokana, manatsara ny mety ho valinteny tsara.
Mampiasa metodista voaporofo anisan'izany ny famakafakana RFM
Singa iray lehibe amin'ny fananganana persona ny famakafakana RFM (Fahatonga ny fifandraisana farany, Frequency of interactive, ary sandan'ny vola an'ny mpanjifa). Autotarget no vahaolana mailaka voalohany hamerenana sy hanavaozana ny fanadihadiana RFM ho an'ny fampielezana mailaka amin'ny Internet.
Ny famakafakana RFM dia be mpampiasa eo amin'ny tontolon'ny ivelan'ny Internet ho an'ny fizarana ny mpanjifa ho vondrona mifototra amin'ny valintenin'izy ireo amin'ny hafatra manokana. Ny sandan'ny famakafakana RFM dia voaporofo nandritra ny am-polony taona maro mba haminavina tsara ny ho fihetsiky ny mpanjifa amin'ny ho avy mifototra amin'ny fitondran-tenany taloha tamin'ny fantsona maro sy ny fihetsiky ny mpanjifa hafa manana profil mitovy aminy.
Izay lazain'ny sela RFM momba ny varotra sy ny fihenam-bidy
Mazava ho azy fa ny mpanjifa manana sanda RFM ambony indrindra dia mifamatotra bebe kokoa amin'ny marika, ary mety hamaly ny tolotra iray ary mitaky fihenam-bidy, vitsy na, mety tsy misy fihenam-bidy. Ny sary an'i OTost Autotarget RFM an'i iPost dia mampiseho ny isan'ny mpanjifa isaky ny sela RFM tena namaly (izay voatsindry, zahana ary novidina) na oviana na oviana amin'ireo mailaka voafantina. Miaraka amin'ity angon-drakitra ity, ny mpivarotra dia afaka mamorona ampahan'ny mpanjifa haingana sy mora mifototra amin'ny valin'ny sela RFM ho an'ny marketing manaraka mahomby.
Autotarget dia maharitra 5 minitra vao ampiasaina
Tsy misy fanadihadiana na endrika ilaina, fa ny 100% -n'ny mpamandrika dia voatanisa ao amin'ny Autotarget. Ny mpanjifa dia mamorona angona isaky ny mifampiresaka amin'ny mailaka mailaka na mividy amin'ny fotoana ifandraisana rehetra (tranokala, POS, na ivon-telefaona). Raha fintinina, Autotarget dia vahaolana matanjaka, nefa haingana sy mora ampiasaina.
Tags: autotargetCraig kerrfihetsiky ny mpanjifalasibatra amin'ny mailakahatetikaipostvahanarecencypeon'ny RFMfanadihadiana RFm